XXI सताब्दी ठीकै डिजिटल प्रविधिहरू को शताब्दीमा छलफल गर्न सकिन्छ। हामी डिजिटल प्रविधि, डिजिटल संचार, डिजिटल चित्र, ध्वनि नम्बर, आदि कमै मात्र छन् धेरै घरमा, तपाईं घर थिएटर पाउन सक्नुहुन्छ, र किनभने यस्तो उपकरण मा आफ्नो मनपर्ने चलचित्र वा खेल कार्यक्रम हेर्दै दर्शकहरू रमाइलो र उत्तेजना धेरै ल्याउँछ यो अचम्मको छैन। घर थिएटर को मुख्य तत्व को एक वी-रिसीभर छ। यो यन्त्र टेलिभिजन र ध्वनिक उपकरण बीच एक प्रमुख ब्रिजिंग भूमिका छ। मुख्य उद्देश्य उपकरण ए वी-रिसीभर जस्ता - ध्वनि र छवि प्रसारण, अडियो सिस्टम यसको वर्दी वितरण को संगठन हो।
त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरु, परिमार्जन र यस्तो उपकरण स्तर छन्। त्यसैले एक प्रश्न एक पटक यस्तो उपकरण खरिद गर्न निर्णय गरेको छ जो एक व्यक्ति: को समतल महंगा उपकरणहरू र सस्ता, र ती र अरूलाई रूपमा देख्न सकिन्छ गरेपछि "सबै भन्दा राम्रो ए वी-रिसीभर कसरी चयन गर्न" त्यहाँ एक विशाल विकल्प छ। यस्तो प्रशस्त बीच तपाईं लामो समय को लागि काम र एकै समयमा एक उच्च गुणवत्ता संकेत दिन हुनेछ कि एक फेला पार्न आवश्यक छ। सही ए वी-रिसीभर चयन गर्न, तपाईं यस्तो उपकरण को nuances थाहा छ। कहिलेकाहीं यो तपाईं अपेक्षा भन्दा बढी पैसा तिर्न राम्रो छ, तर यो प्रविधी तपाईं नियमित थप एक वर्ष भन्दा सेवा गर्नेछन्।
अब तपाईं जब वी-रिसीभर छनौट खरीदार ध्यान गर्न आवश्यक सुविधाहरू के हेरौं। यस्तो उपकरणहरू को मुख्य प्यारामिटर उपकरण उत्पादन हो। यो विशेषता ए वी-रिसीभर को ध्वनिक संकेत गुणस्तर र शुद्धता दिनेछु के निर्भर छ। तपाईंको ध्यान उपकरणहरू को एक विस्तृत विकल्प हो भने, तपाईं प्रस्तावित प्रविधी को एक गहन समीक्षा गर्न अनुरोध गर्न निश्चित हुन। केही मोडेल मा "अधिकतम उत्पादन" वा "शिखर शक्ति" को लेबल राखिनेछ भने, सम्भवत, यो सिर्फ, धातु स्क्रैप जो देखि व्यापारीहरु को चाँडै छुटकारा प्राप्त गर्न प्रयास हो। आफ्नो समय बर्बाद छैन, त्यस्तो उपकरणहरू विचार छैन! खैर, सामान्यतया यस्तो रिसीभर एक कम मूल्य छ, र बिक्री सलाहकार तपाईं यस्तो उत्पादन आयातित लागि संघर्ष गर्दै छन्। तपाईं तिर्नुपर्छ दोस्रो कुरा ध्यान गर्ने छ डिकोडर। Dolby डिजिटल र Dolby प्रो तर्क द्वितीय: वहाँ प्रणाली को दुई प्रकार हो। उत्तरार्द्ध सिस्टम राम्रो छ, यो स्पष्ट ध्वनि उत्पादन गर्छ।
यसलाई पहिले नै तयार पसलमा जान सबै भन्दा राम्रो छ। एक उत्पादन बारेमा इन्टरनेट थप जानकारी प्रयोग इकट्ठा, एक समीक्षा बनाउन, दुई वा तीन होनहार मोडेल चयन गर्नुहोस्। विवरण पढ्न र अर्को एकदम - - र पहिले नै भण्डारमा एउटा कुरा, किनभने सञ्चालन मा ए वी-रिसीभर देखाउन, सोध्न हेर्न र प्रकृति मा सुन्न। खरीद गर्दा, किरा सबै आवश्यक केबल, connectors र एडेप्टर समावेश निश्चित गर्नुहोस्। सबैभन्दा उपकरणहरू subwoofer जडान गर्न, र क्रमशः एक उत्पादन छ डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं धेरै यन्त्रहरू जडान गर्न योजना भने, आउटपुटहरू को आवश्यक नम्बर संग ए वी-रिसीभर चयन गर्नुहोस्।
त्यसैले हामी देख्यो , के वी-रिसीभर यो छ के को लागि र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, यो कसरी चयन गर्न। तपाईँले यो यन्त्र छैन भने, तपाईंले आफ्नो ए वी-रिसीभर चयन गर्न यो लेखमा निर्देशन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Outboards सागर प्रो - जापानी प्रविधी एक योग्य वैकल्पिक
भोल्टेज गुणक: संचालन र स्कोप सिद्धान्त।
आफ्नो हातले स्टेरियो एम्पलीफायर
अवलोकन Breadmaker पानासोनिक एसडी-2511 WTS
टन को लागि बोनस: तपाईं कसरी थाह, खर्च, दान?
ड्राइभिङ एफआइआर मनका: राम्रो र सजिलो!
Enema Slimming स्वास्थ्य हानिकारक?
को GEF पाठ को चार्ट प्रवाह। अनुसार यस GEF को आवश्यकताहरु संग पाठ को मार्ग को तैयारी,
स्तर लेजर leveling: वर्णन, पद
"Meksiprim" दबाइ। प्रयोग र वर्णन लागि निर्देशन
मास्टर को दिन, घन्टा को लागि मास्टर - सुविधाजनक र लाभदायक
बर्नाउल, अस्पताल "ओब": समीक्षा र फोटो